Psalmen 39 HTB - Nnwom 39 ASCB
1Mekaa sɛ, “Mɛhwɛ mʼakwan yie
ɛberɛ a amumuyɛfoɔ bɛne me yi.
2Nanso brɛ a meyɛɛ komm
a manka asɛm papa biara mpo no
mʼapinisie mu yɛɛ den.
3Mʼakoma ho dwanee no wɔ me mu
na metee nka sɛ ogya redɛre wɔ me mu
na afei mede me tɛkrɛma kasaeɛ sɛ:
4“Ao Awurade, ma menhunu me nkwa awieeɛ
ne me nna dodoɔ;
ma menhunu sɛdeɛ me nkwa twa mu ntɛm so.
5Woayɛ me nna sɛ nsateakwaa baako pɛ;
na me mfeɛ dodoɔ nyɛ hwee wɔ wʼani so.
Onipa nkwa yɛ ahomeɛ bi kɛkɛ.
6Onipa redi akɔneaba nyinaa no, ɔte sɛ sunsum bi kwa;
ɔha ne ho, nanso ɔyɛ kwa;
ɔboa ahonya ano, na ɔnnim deɛ ɛbɛyɛ ne dea.
7“Afei Awurade ɛdeɛn na merehwehwɛ?
Mʼanidasoɔ wɔ wo mu.
8Gye me firi me bɔne nyinaa mu;
mma mennyɛ nkwaseafoɔ aseredeɛ.
9Meyɛɛ komm, na mammue mʼano
ɛfiri sɛ, wo na woayɛ yei.
10Yi wʼasotwe firi me so;
wosɛe wɔn ahonya te sɛ nweweboa
onipa biara yɛ ahomeɛ kɛkɛ.
12“Ao Awurade, tie me mpaeɛbɔ,
nsi wʼaso wɔ me su ho
Me ne wo te hɔ sɛ ɔhɔhoɔ,
sɛdeɛ na mʼagyanom nyinaa teɛ no.
13Yi wʼani firi me so na manya anigyeɛ bio
ansa na mafiri ha a mente ase bio.”
ASCB : Nnwom 39